(L) သုတေသနအသစ်က dopamine နှင့်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာများဆက်စပ်မှုကိုအလင်းပေးသည် (2012) - Your Brain On Porn
(L) ကိုနယူးသုတေသနကိုသွန်း dopamine နှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်သွယ်မှုအပေါ် (2012) ပွင့်လင်း
နယူးသုတေသနကိုသွန်း dopamine နှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်သွယ်မှုအပေါ်ပွင့်လင်း
ဗ Steakley ဒီဇင်ဘာလ 12th, 2012 အပေါ်
စတန်းဖို့ဒ်မှာသုတေသီတစ်ဦးကအသင်းကိုအောင်မြင်စွာအဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်တစ်ဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်ကြွက်များတွင်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ချို့တဲ့သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်စိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြ ventral tegmental ဧရိယာ။ ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် dopamine တစ်အရင်းအမြစ်နှင့်ဦးနှောက်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များအတွက်ဗဟိုကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
အလင်းမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ဗီဇဟာ VTA အတွက် dopamine အာရုံခံပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်တွေမှာမျိုးစုံစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်သက်သာရာရစေဖို့နှစ်ဦးစလုံးနိုင်ပါ [သုတေသီများကခဲ့ကြသည်] ။ ကြွက် '' ဦးနှောက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖိုင်ဘာဆက်ကြောင်းကိုသုံးပြီးသူတို့ထို့နောက်ချက်ချင်းပေါ်နဲ့ off အလင်းကိုလှည့်အားဖြင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာထုတ်လုပ်ရန်နှင့်တားစီးနိုင်ပါတယ်။ 2005 အတွက်စတန်းဖို့ဒ်မှာ Deisseroth အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဒါဟာသုတေသန technique ကို, optogenetics အဖြစ်လူသိများသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည်သူ၏ VTA အာရုံခံ optogenetically ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပျော့ဖိအားများကသွေးဆောင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်-ကဲ့သို့နိမ့်စိတ်အားထက်သန်ပြည်နယ်ထဲမှာကြွက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ VTA dopamine အာရုံခံမှအလင်းဆွပေးထားသည့်အခါ "ဤကြွက်ထွက်ပေါက်-ဆက်စပ်အပြုအမူအတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုးပြသခဲ့သည်။ သူတို့ကချက်ချင်းစိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများထဲကရရှိရန်ခက်ခဲကြိုးစားခဲ့ - နောက်ကျောကိုသူတို့ရှိကြ၏စိတျကဲ့သို့အခြေအနေမှကြိုးစားအားထုတ်မှု၏သာမန်အဆင့်ဆင့်မှနောက်ပြန်ဆုတ်, "Deisseroth ရှင်းပြသည်။
စတန်းဖို့ဒ် bioengineer နှင့်လေ့လာမှု၏အကြီးတန်းစာရေးဆရာ ကားလ် Deisserothventral tegmental dopamine အာရုံခံ - - နှစ်ဦးစလုံးဟာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ကျရောဂါ-related လက္ခဏာတွေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်သာရာအတွက်တစ်ဦး addressing, MD, Ph.D, အဲဒီရလဒ်တွေကိုတိုက်ရိုက်တစ်ခုတည်းကဦးနှောက်ဒေသတွင်း၌အာရုံခံဆဲလျ၏တစ်ခုတည်းလူတန်းစားပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ "ဟုဆိုလျက်, တွေ့ရှိချက်များ၏အရေးပါမှုအပေါ် commented ရောဂါ pathophysiology အတွက်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်။ "
ထိုစဉ်တွင် ရလဒ်များကို စိတ်ကျရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါများသည်ရှုပ်ထွေးပြီးဘက်ပေါင်းစုံအခြေအနေများဖြစ်ပြီးလူနာများအကြားကွဲပြားမှုရှိသည်ဟု Deisseroth ကသတိပြုမိသည်။ ဒါပေမယ့်သူက
... ကျနော်တို့လေ့လာ VTA dopamine circuitry ကြွက်နှင့်လူသားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အလွန်ဆင်တူသည်။ ထိုအကြှနျုပျတို့သညျဤတိုက်နယ်အတွင်းရှိအာရုံခံအထူးသ, စေမှန်ကန်သောနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏ကွဲပြားခြားနားလက္ခဏာတွေဝှက်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာအနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အလားအလာဂယက်နှင့်အတူစိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ၏ဇီဝကျောထောက်နောက်ခံပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကြိုတင်ဖြစ်ပါတယ်။
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီအောင်မြင်စွာအသုံးပြုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ရှိသည် အလင်း သွေးဆောင်ပြီးတော့မှသက်သာရာရစေရန်ကြွက်တွေမှာဦးနှောက်ဧရိယာ၏ဆွ စိတ်ကျရောဂါအပျော်အပါးနှင့်လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်းမရှိခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများ -like ။ အဆိုပါရလဒ်များဂုဏ်သတင်းသိပ္ပံဂျာနယ်များ၏ဒီဇင်ဘာ 12 စာစောင်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည် သဘာဝ.
စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်, ဒါမှမဟုတ်ပင်နံနက်ယံ၌အိပ်ရာထဲကရဖို့ - - တခါပျြောမှေ့စအရာရာ၌ခံစားတွေ့ကြုံခံစားဖို့နဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်, စိတ်ကျရောဂါကနေ dual-နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းခံရသူတို့တွင်ကအဘယ်ကြောင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ခဲ့သော်လည်းဆယ်စုနှစ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ ရောဂါလက္ခဏာတွေဤအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးအတူတူတက်ပြခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါကိုအောင်မြင်စွာကုသအခါလည်းအတူတူပျောက်ကွယ်သွား။
ဒါဟာဦးနှောက်ဓာတု dopamine ရောဂါအတွက်သော့ချက်ကစားသမားဖြစ်နိုင်ကြောင်းသံသယရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအသေး, စိတ်ကျရောဂါ၏လေ့လာမှု၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းတွင်အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းစွာယခုတိုင်အောင်အတူတကွသည်ဤသော့ချက်သဘောတရားများကိုကြိုးနဲ့တုတ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများအောင်မြင်စွာ ventral tegmental ဧရိယာအဖြစ်လူသိများဦးနှောက်ရုံတစ်ခုတည်းဧရိယာကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်ကြွက်များတွင်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ချို့တဲ့သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်စိတ်သက်သာရာရကြပြီ။ ဒါဟာတိကျတဲ့ဦးနှောက်ဒေသအတွင်းအာရုံခံကောင်းစွာ-သတ်မှတ်ပုံစံများကိုတိုက်ရိုက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါနာမကျန်း၏များပြားလှလက္ခဏာတွေထိန်းချုပ်မှုမှချည်ထားသောခဲ့ကြကြောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ဆေးပညာကျောင်းသည်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းဆေးကျောင်းများအနက်အဆက်မပြတ်ပါ ၀ င်သည်။ သုတေသန၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရေး၊ ကျောင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ http://mednews.stanford.edu။ ဆေးကျောင်းသည်စတန်းဖို့ဒ်ဆေးရုံနှင့်ဆေးခန်းနှင့် Lucile Packard ကလေးဆေးရုံတို့ပါ ၀ င်သည့်စတန်းဖို့ဒ်ဆေးပညာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
စတန်းဖို့ဒ် bioengineer ကားလ် Deisseroth, MD, Ph.D နှင့်ကေး Tye, Ph.D နှင့်အမျိုးသမီး Melissa မှူး, Ph.D, နှင့်သုတေသနလက်ထောက်ဂျူလီ Mirzabekov မျိုးစုံစိတ်ကျရောဂါတူသောထုတ်လုပ်မယ့်တိကျတဲ့ဦးနှောက်တည်နေရာကိုအတိအကျရှာရန် optogenetics အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ technique ကိုသုံးကိုပါရဂူပညာရှင်တွေအပါအဝင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ။
စတန်းဖို့ဒ်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသည်ရာစုနှစ်တစ်စုနီးပါးဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင်ရှေ့တန်းမှပါဝင်ခဲ့ပြီးနည်းပညာ၊ ဆေးပညာ၊ စွမ်းအင်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးလောကကိုအသွင်ပြောင်း။ ဆီလီကွန်တောင်ကြားအခြေခံအုတ်မြစ်ချသည့်အဓိကနည်းပညာများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ကျောင်းသည်သင်ကြားရေးနှင့်သုတေသနမှတစ်ဆင့်ခေတ်သစ်သိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင်နီယာကိုတိုးတက်စေသည် ဤကျောင်းသည်ဌာန ၉ ခု၊ ဆရာ ၂၄၅ ဦး နှင့်ကျောင်းသား ၄၀၀၀ ကျော်တို့၏နေရာဖြစ်ပြီးလူသားကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တံ့ရေးစသည့်နယ်ပယ်များရှိကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းသည်။
ဤဒေသသည် dopamine ၏အရင်းအမြစ်နှင့် ဦး နှောက်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များတွင်အဓိကကစားသမား VTA ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်သက်သာစေရန်ပထမဆုံးအကြိမ် VTA တွင် dopamine neuron များကိုတိုက်ရိုက်ချည်နှောင်ခဲ့သည်။
လေ့လာမှု၏အကြီးတန်းစာရေးဆရာနှင့်ဇီဝအင်ဂျင်နီယာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်သူ Deisseroth ကပြောကြားခဲ့သည်။
စိတ်ကျရောဂါသည်ရှုပ်ထွေးသောရောဂါဖြစ်သော်လည်းမသိသေးသူများစွာရှိသော်လည်းဤအသိပညာသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိစိတ်ကျရောဂါလမ်းကြောင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအသစ်များပြုလုပ်ရန်နှင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသူများကိုကူညီရန်အယူအဆများကိုဖော်ထုတ်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
Deisseroth ၏အဖွဲ့သည်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်တူသောရောဂါလက္ခဏာများစွာကို VTA ရှိ dopamine neuron များအားအလင်းနှင့်ထိတွေ့စေရန်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြွက်များ၏ ဦး နှောက်ထဲကိုထည့်လိုက်သော fiber optic cable များကို အသုံးပြု၍ အလင်းကိုအလှည့်အပိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုချက်ချင်းထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်သည်။ ဒီသုတေသနနည်းစနစ်ကို Deisseroth က ၂၀၀၅ မှာစတန်းဖို့ဒ်ရှိ Stanford မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး optogenetics လို့ခေါ်တယ်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည်အဘယ်သူ၏ VTA အာရုံခံ optogenetically ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပျော့ဖိအားများကသွေးဆောင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်-ကဲ့သို့နိမ့်စိတ်အားထက်သန်ပြည်နယ်ထဲမှာကြွက်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
VTA dopamine အာရုံခံများကိုအလင်းလှုံ့ဆော်ပေးသောအခါထိုကြွက်များသည်ထွက်ပေါက်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများပိုမိုတိုးတက်လာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူတို့ဟာချက်ချင်းပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ သူတို့ဟာစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပြည်နယ်ကနေပုံမှန်အားထုတ်မှုအဆင့်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ ”
လွင်ပြင်ကိုကျော်သကြားရေရွေးချယ်မှုပူဇော်သောအခါသူတို့ရဲ့ VTA dopamine အာရုံခံ illumination ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွသောအခါအလားတူပင်ဟုသူကပြောသည်, တစ်ဦးစိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့သောပြည်နယ်အတွင်းရှိခဲ့သောကြွက်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူသကြားရေရွေးကောက်ခဲ့သည်။ နောက်ကျောသာမန်အဆင့်ဆင့်မှ - သူတို့ကအရသာကိုခံစားရဖို့ရွေးချယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှင့်သိသိသာသာ, Deisseroth မှတ်ချက်ချ, optogenetically အဆိုပါ VTA dopamine အာရုံခံဟန့်တားမယ့်အစားသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေနှစ်ဦးစလုံးအမျိုးမျိုး, တညျ့ထက်, စေသော - ချက်ချင်းနှင့် reversibly ။
Deisseroth က“ ဒီရလဒ်တွေက ဦး နှောက်တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ ventral tegmental dopamine neuron တွေမှာရှိတဲ့အာရုံခံဆဲလ်တစ်မျိုးတည်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုရှိတယ်၊ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုထုတ်လွှတ်ပြီးသက်သာအောင်လုပ်တယ်၊
သို့သော်လည်းနောက်ထပ် key ကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုနေတုန်းပဲကျန်ရစ်: မြစ်အောက်ပိုင်းဆားကစ်ဖို့လုပ်နေတာဟာ VTA dopamine အာရုံခံဘာတွေလဲ? တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုစိတ်ကျရောဂါ-ဆက်စပ်ထိန်းချုပ်အချက်ပြဖတ်ကြားကြသနည်း
ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်, သုတေသီများလာမယ့်, အနျူကလိယ accumbens အပေါ် VTA အတွက် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုများ၏သက်ရောက်မှုပုံဖော်ကခြေလှမ်းနောက်ထပ်အပျြောအပါးများ၏မတူကွဲပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ဦးနှောက်အလယ်ဗဟိုအလုပ် ယူ. , ဖွယ်ရှိစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုက် လည်းပဲ သဘာဝက ဆုလာဘ်။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုမြင်လျှင် dopamine အာရုံခံဆဲလျသက်ရောက်မှုဦးနှောက်ထဲမှာထင်ရှားဘယ်လို VTA များအတွက်ယန္တရားအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးလိမ့်မယ်။
"တကယ်တော့ကျနော်တို့ကနျူကလိယ accumbens အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်၏ electrophysiological ကိုယ်စားပြုမှုကိုတကယ်တော့အခြေခံအားဖြင့်အခြေခံအားဖြင့် VTA dopamine အာရုံခံဆဲလ် activation အားဖြင့်ပြောင်းလဲကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ငါတို့က VTA dopamine neuron တွေကို activate လုပ်ရင်၊ ဒါဟာနျူကလိယ accumbens ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊
Deisseroth အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ အတူတကွဤရလဒ်များအကြောင်းရင်းများနှင့်စိတ်ကျရောဂါ-related အပြုအမူ၏သဘောသဘာဝသို့အချိန်ကြာမြင့်စွာဆည်းကပ် circuit ကို-Level ထိုးထွင်းသိမြင်ကိုယ်စားပြုသည်။
ရလဒ်သိသာများမှာနေစဉ်, စတဲ့လေ့ကျင့်စိတ်ရောဂါသူသည် Deisseroth, ကြောင်းစိတ်ကျရောဂါနဲ့အခြားစိတ်ရောဂါသတိပေးခဲ့သည်, multidimensional ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြပြီးလူနာများထံမှလူနာခြားနားသည်။ စိတ်ကျရောဂါ၏လက်ခဏာဆက်ဆက်အများအပြားအာရုံကြောဆားကစ်ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်ဟုသူကဆိုသည်။
“ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သော VTA dopamine circuit များသည်ကြွက်များနှင့်လူသားများတွင်ပါအလွန်ဆင်တူသည်။ ပြီးတော့ဒီပြသမှုမှာရှိတဲ့အာရုံခံဆဲလ်တွေဟာစိတ်ကျဝေဒနာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်၊ ​​မှန်ကန်စေတယ်၊ ဒါဟာအနာဂတ်သုတေသနအတွက်အလားအလာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအပြုအမူများ၏ဇီဝဗေဒအခြေခံများ၏နားလည်မှုအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် "
"ကျနော်တို့မူလကတိရိစ္ဆာန်တိုးတက်မှု၏တစ်ဦးအစွမ်းထက် stimulator အဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) တိရိစ္ဆာန်များ running ၏ဦးနှောက်အတွက်တိုးပွါးနှင့်ဤအသစ်သောအာရုံကြောပင်မဆဲလ်များ၏ activation လှုံ့ဆော်သည်ဟုတွေ့ကြပြီ"
QBI သိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာဒံယလေသ Blackmore ကဆိုသည်။
သငျသညျ, သင့်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ကျန်းမာဦးနှောက်ရှိသည်နှင့်သင်ဘဝအကြောင်းကိုခံစားရလမ်းအဖြစ်လျှော့ချတိုးတက်လာဖို့လိုပါလျှင် PCOS ရောဂါလက္ခဏာအားဖြင့် အင်ဆူလင် Sensitivity ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ, အဖြေ, ဒါကြောင့်, နေရောင်ခြည်သို့ထွက်ရတဲ့နှင့်အချို့သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာတည်ရှိသည်!
Chaudhury, Dipesh ။ midbrain dopamine အာရုံခံထိန်းချုပ်နေဖြင့်စိတ်ကျရောဂါ-related အပြုအမူတွေ၏ (2012-12-12) Rapid စည်းမျဉ်း။ သဘာဝတရား, 351 ။ Doi: 10.1038 / nature11713
Tye, ကေးအမ် (2012-12-12) Dopamine အာရုံခံအာရုံကြော encoding ကများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ-related အပြုအမူ၏စကားရပ် modulate ။ သဘာဝတရား, 2877 ။ Doi: 10.1038 / nature11740
Blackmore DG, Vukovic J, Waters MJ, & Bartlett PF ။ (၂၀၁၂) ဘိုးဘွားရိပ်သာကြွက်တွေအတွက် SVZ ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောရှေ့ပြေးဆဲလ်၏ GH ဖျန်ဖြေလေ့ကျင့်ခန်း-မှီခို Activation ။ PloS တ7(11) ။ PMID: 23209615